Gini mere Odi Oso Ogwu di Olu? Etu esi nwalee ma meziwanye nke gi | Martech Zone
Imirikiti saịtị na-efunahụ ihe dị ka ọkara nke ndị ọbịa n'ihi ọsọ ọsọ ibe ha. N'ezie, ibe desktọọpụ nke ibe weebụ ọnụego bounce bụ 42%, nkezi ọnụego bounce web peeji nke ọnụego bụ 58%, yana nkezi post-pịa ọdịda peeji ibiaghachi ọnụ sitere na 60 ruo 90%. Naghi onu ogugu site n’uzo obula, tumadi n’igoro ojiji ekwenti n’aga n’ihu na etolite ma ya esi ike karie ubochi iji dọta ma debe ndi ahia.
Dabere na Google, nkezi peeji ibu oge maka elu ọdịda peeji nkeka bụ umengwụ 12.8 sekọnd. Nke a gụnyere ebe ebe ịntanetị na-enweta ịntanetị na-agba ọsọ na 4G ọsọ bụ ụfọdụ n'ime ụwa kachasị elu.
Ogologo peeji a dị ogologo dị ogologo, na-atụle 53% nke ndị ọrụ na-agbahapụ ibe mgbe naanị 3 sekọnd - ọ na - akawanye njọ n'ebe ahụ:
Kedu ihe bụ ezigbo ọsọ ibu peeji, mgbe ahụ? Near-ozugbo.
Ọ dabara nke ọma, e nwere ihe ngwọta. Tupu anyị eruo na nke ahụ, ka anyị kpughee karịa banyere mkpa nke ọsọ ọsọ.
eMarketer gosipụtara na na 2019 mmefu mgbasa ozi dijitalụ zuru ụwa ọnụ ga-akarị $ 316 ijeri naanị na-achọ ịbawanye maka ọdịnihu n'ọdịnihu:
N’ụzọ doro anya, ụdị na-emefu nnukwu ego na mgbasa ozi ma na-atụ anya inweta ọtụtụ ihe na mmefu ego ha. Mana, mgbe ndị mmadụ pịrị pịa mgbasa - na post-pịa ọdịda peeji ada ada ozugbo - ha nwere ike pịaghachi azụ n'ime sekọnd ole na ole, yabụ, na-efusi mmefu ego nke ndị mgbasa ozi.
Ọnụ ego nke ọsọ ọsọ dị oke oke ma ị kwesịrị ịme ka ịme ọsọ ọsọ bụrụ ihe kacha mkpa na-aga n'ihu. Ndị a bụ usoro metrik na isi iji tụlee ka ị na-enyocha mkpọsa mgbasa ozi dijitalụ nke gị:
Ọbụghị naanị na iwe dị nwayọ na-ebu iwe ndị ọrụ, mana ọ na - ebute Ọkara Ogo ka ahụhụ. Ebe ọ bụ na Ogo akara metụtara gị ọkwa ọkwa, na n'ikpeazụ ihe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka pịa ọ bụla, peeji nke na-eji nwayọ nwayọ na-ebelata akara.
Ọ bụrụ na mmadụ ole na ole na-arapara na-eche ka ibe gị rụọ ọrụ, mmadụ ole na ole na-enweta ohere ịtụgharị. Ha na-ahapụ ibe gị tupu ha ahụ onyinye gị, uru gị, ịkpọ oku, wdg.
Na mkpọsa, dịka ọmụmaatụ, ọbụlagodi otu oge nke abụọ na oge a na-ebugharị ngwa ngwa nwere ike imetụta ọnụego ntụgharị site na 20%.
Gara ọkara site na 2016, ojiji ntanetị eji eme ihe gafere okporo ụzọ desktọọpụ na olu:
Na-eji ọkụ emefu oge ka ukwuu na mkpanaka, a manyere ndị na-ere ahịa na ndị mgbasa ozi (ma ka na-agbanwe) ime mgbanwe. Otu ụzọ ịnapụta mobile-kachasị mkpọsa bụ imepụta peeji na-ebu ngwa ngwa.
Nke na-ewetara anyị ọsọ ọsọ ọsọ nke # 1 nke na-ekwu banyere nke ọ bụla n'okwu ndị a.
Peeji AMP na-abawanye Ọsọ Peeji
AMP, ndị Isi mmalite ewebata na 2016, na-enye ụzọ maka ndị mgbasa ozi iji mepụta ngwa ngwa ngwa ngwa, ibe weebụ na-edozi nke na-ebute ọrụ onye ọrụ ahụ karịa ihe niile.
Dị ka onye ndu na njikarịcha post-pịa njikarịcha, Instapage na-enye ike iji mepụta AMP post-click ọdịda peeji nke:
Na Onye na-ewu ụlọ AMP, ndị ahịa na ndị mgbasa ozi nwere ike:
Mepụta AMP post-pịa ọdịda peeji nke sitere na ikpo okwu Instapage, na-enweghị onye nrụpụta
Nyochaa, ule A / B, ma bipụta peeji AMP na WordPress ma ọ bụ ngalaba omenala
Nyefee ahụmịhe mkpanaka ka mma, nwekwuo ogo ogo, ma nwekwuo ntụgharị
Companylọ ọrụ na-anụ ihe na-anụ ihe na-agbanwe agbanwe nke Eargo ahụla nsonaazụ dị ịtụnanya ebe ọ bụ na itinye AMP n'ọrụ na post-pịa ahụmahụ:
Ibe akwukwo AMP na Instapage
Na mgbakwunye na iwuli peeji AMP na Instapage, enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị ga - esi melite ọsọ ọsọ. Ndị a bụ atọ n'ime ha iji bido.
3 Otherzọ ndị ọzọ iji meziwanye Ọsọ Peeji
1. Leverage na-agba ọsọ ngwa ngwa
Enwere ike inweta ihe ọmụma bụ ule Google ọsọ nke na-agụ peeji gị site na 0 ruo 100 isi:
Chekwa dabere na mpaghara abụọ:
Oge ị ga-ebu ibu (oge zuru ezu maka ibe iji gosipụta ọdịnaya n'elu ogige ahụ mgbe onye ọrụ rịọrọ peeji ọhụrụ)
Oge zuru ezu ibu ibu (oge ọ na-ewe ihe nchọgharị iji nyefee peeji nke zuru ezu mgbe onye ọrụ rịọrọ ya)
Nke dị elu na akara gị, otu kachasị ka ibe gị dị. Dị ka usoro isi, ihe ọ bụla dị n'elu 85 na-egosi na ibe gị na-eme nke ọma. Ala karịa 85 na ị kwesịrị ile anya na aro ndị Google nyere iji bulie akara gị.
Enweghi ike nghọta na-enye akụkọ maka desktọọpụ na nsụgharị mobile nke ibe gị, na-enyekwa ndụmọdụ maka mmelite.
Chee echiche na Google: Nwaleenụ saịtị m, nke ndi otu PageSpeed ​​Insights kwalitere, na-anwale ọsọ ọsọ ihu igwe, ma ọ bụghị na ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ. Ọ bụ ihe ọzọ na-egosi otu ngwa ngwa (ma ọ bụ nwayọ) peeji gị na-ebu:
Ngwá ọrụ a na-egosiputa oge ị na-ebugharị, na-enye ndụmọdụ maka ọdịnala iji mee ka ibe gị dị ngwa na saịtị gị, wee nye nhọrọ iji mepụta akụkọ zuru ezu.
2. Ofụri Esịt Kachasị Anya Images (mkpakọ)
Imageskwalite onyonyo na mkpakọ, imegharị, ịmegharị, wdg nwere ike inyere aka ịchekwa bytes, mee ka oge ngwa ngwa peeji dị elu, ma melite arụmọrụ saịtị. Otu n'ime ndụmọdụ ndị ọzọ dị elu, Google na-ekwu wepu ihe oyiyi dị elu na GIF ndị na-enweghị isi na dochie ihe oyiyi na ederede ma ọ bụ CSS mgbe ọ bụla enwere ike.
Ọzọkwa, ọ dị ugbu a karịa mgbe ọ bụla iji jeere ozi eserese na ngbanwe n'ihi na ntọala ndị a nwere ike ịkpaaka. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe ọtụtụ narị onyonyo megharịrị ma jikọtara ya na akpaghị aka na edemede, na-ebelata ọrụ aka (mgbe ị na-ewu peeji AMP, akara ngosi ihe oyiyi na-eme ọtụtụ n'ime otu njikarịcha akpaaka).
Họrọ ezigbo ụdị ihe oyiyi nwere ike isi ike na ọtụtụ nhọrọ ndị dịnụ. Ihe niile dabere na iji ojiji, mana lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị:
Weebụ Foto na translucent oyiyi
JPEG: Foto na-enweghị nghọta
PNG: Piel gafere
SVG: Scalable Akara na ụdị
Google na-atụ aro ịmalite site na WebP n'ihi na ọ na-enye ohere 30% karịa mkpakọ karịa JPEG, na-enweghị ihe nfu ọ bụla nke ogo oyiyi.
3. Na-ebute ọdịnaya dị n'elu karịa ụzọ
Kwalite nghọta onye ọrụ gị banyere ọsọ saịtị dị ihe dị mkpa dị ka ịkwalite ọsọ ọsọ saịtị ya. Ọ bụ ya mere ozugbo ejiri ihe oyiyi gị rụọ ọrụ nke ọma, ị ga-enwerịrị ike ijide n'aka na a napụtara ha n'oge kwesịrị ekwesị.
Chebagodịrị ihe a echiche: N’elu ebe a na-akwagharị akwagharị, ebe a na-ahụ anya ka saịtị dị n’obere mpaghara, n'elu ogige atụrụ. N'ihi ya, ị nwere ohere iji ngwa ngwa bulie ọdịnaya na mpaghara, mgbe ndị ọzọ ọcha n'okpuru anọghị n'ogige atụrụ na-ebudata na ndabere.
Mara: Ihe na - enyere aka mee AMP pụrụ iche bụ na ewubere ya itinye ihe ntinye akụ, na - achọpụta na ọ bụ naanị ihe kacha mkpa ka ebudatara.
Ọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka iji belata ọnụ ọgụgụ nke onyonyo na saịtị - ọkachasị maka ụdị ndị na-ere ahịa, yana ọtụtụ ngwaahịa - mana ọ ka dị oke mkpa iji belata mmetụta nke onyonyo na oge ibu site na usoro atọ a.
Jiri ngwa AMP dịkwuo peeji nke gị
Ọ bụrụ na ibe mkpanaka gị na-ata ahụhụ site na oke ọnụego na ọnụego ntụgharị dị ala n'ihi ọsịsọ ọsọ peeji, peeji AMP nwere ike ịbụ amara nzọpụta gị.
Bido mepee peeji AMP pachara pịa iji nyefee ndị na-eleta gị ngwa ngwa, kachasị, yana ahụmịhe nchọgharị mkpanaka dị na ya, ma melite ogo ogo gị na ntụgharị na usoro ahụ.
Tags: ampamp ọdịda peejintụgharị ntụgharịmgbanwe ntụgharịimage mkpakọụdị ihe oyiyiNtugharijpgmbido peeji nkemobile ahụmahụpeeji nke mkpanakamobile ọsọweebụ mkpanakanyocha peejiihu peejinyocha akwukwoEengwaọrụ ọsọ ọsọsvgchee na Googlewebp